गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्री लिएर प्रधानमन्त्री ओली चीन जाने, राष्ट्रपति सिसँगको भेट अझै अनिश्चित ! – Medianp
गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्री लिएर प्रधानमन्त्री ओली चीन जाने, राष्ट्रपति सिसँगको भेट अझै अनिश्चित !
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५११:३५0
काठमाडौं, ३१ जेठ । प्रधनमन्त्री केपी ओली असार ५ गते चीन जाँदैछन् । पाँच दिने भ्रमणमा चीनको राजकीय भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीको टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायत छन् । साथै, फस्र्ट लेडी प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य पनि टोलीमा रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीमा रहने अन्य व्यक्तिको नाम फाइनल भइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङलगायतका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने जनाएको छ । नेपाल र चीनबीच केही सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्ताबारे मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन । ओलीको यो राजकीय भ्रमण हो । राजकीय भ्रमण भएकाले राष्ट्रपति सिसँग भेटवार्ता निश्चित भएकाले विज्ञप्तिमा उनको नाम नराखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङका साथै कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । ओलीले बेइजिङमा नेपाल चीन बिजनेस फोरम र थिंक ट्यांकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै ल्हासाको भ्रमण गर्नेछन् । गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणस्वरूप भारत गएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा गृहमन्त्री सायदै जाने गर्छन् । तर, यसपटक ओलीले गृहमन्त्री थापालाई पनि सँगै लैजाने भएका छन् । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग थापाको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइन्छ । यसैगरी, ऊर्जामन्त्री पुनलाई चीन लानुको मुख्य उद्देश्य धेरै ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले बुझिएको छ । ओली भ्रमणका बेला करिब १० वटा सम्झौता ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी रहने छ ।
प्रदेश नम्बर ३ को बजेट भोलि सार्वजनिक हुने
श्रीमानको हत्या गरी श्रीमती फरार